ဟားခါးမြို့ပေါ်ရှိ ငါးကန်များကို အာဏာပိုင်များက ပျက်သိမ်းခိုင်း |
၈ ဇွန်လ ၂၀၁၀၊ (ဟားခါး) ချင်းပြည်နယ်၏မြို.တော် ဟားခါးမြို.ရှိ ပုဂ္ဂလိကပိုင် ငါးမွေးမြူကန်များ ကို ယခုလအတွင်း အကုန်ဖျက်သိမ်းရမည်ဟု ဟားခါးမြို. မယက အဖွဲ.ကအမိန်. ထုတ်ပြန် ထားသည်ဟုသိရသည်။